China Kufuridzira uye Pneumatic Inoratidzira Midziyo Fekitori, Aspiration uye Pneumatic Inoratidzira Midziyo Mutengesi
Hupfu chigayo kupomba jeti firita zvakanyanya kushandiswa muKudya, Zviyo uye Kudya maindasitiri. Zvakare inoshandiswa muChemical, Medical uye mamwe maindasitiri.
Hupfu hwokugaya hwakabvira Equipment Two Way Valve
Muchina wekushandura iwo maratidziro ekuratidzira maficha mu pneumatic irikutaridza system.Widely inoshandiswa pneumatic irikupa mutsara weupfu chigayo, chikafu chegayo, mupunga wemupunga zvichingodaro.
Iwo mavanes uye chokurukisa zvinogadzirwa sechinhu chisina kugadzikana. Midzi blower ine hupenyu hwakareba hwebasa uye inogona kumhanya ichienderera.
SePD (yakanaka yekubva) blower, inouya neakakwira vhoriyamu yekushandisa chiyero uye yakakwira vhoriyamu kugona.
Semunhu anoshanda nemagetsi kufefetedza, yedu centrifugal feni yakaiswa pasi pesimba rakasimba rekuyera bvunzo. Iyo inoratidzira neyepasi inoshanda ruzha uye nyore kugadzirisa. Iko kushanda uye kwakasarudzika A-kuyerwa ruzha danho zviri zviviri kusvika kuGiredhi A muyero unodzorwa nehukama hweChinese nyika zviyero.
Negative Kumanikidza Airlock
Dhizaini yepamberi uye yekugadzira kwakanaka kweiyi mhepo yekuvharira yakave nechokwadi chekuti mweya unosimbisa zvakakwana nepo vhiri rinotenderera richimhanya zvakanaka.
Girazi rekuona rinowanikwa panopinda iyo yakashata yekumanikidza airlock yekutarisa kwakananga.
Izvo zvinhu zvinopinda kubva kumusoro kumusoro, uye wopfuura nepakati pemvura, uye wozoburitswa kubva kuburitsa pazasi. Iyo inowanzo fanirwa yekudyisa zvinhu mune yakanaka yekumanikidza pombi, iyo yakanaka kumanikidza airlock inogona kuwanikwa mune furawa fekitori.
Pneumatic Pipes yeFurawa Mill Musimboti: - Yakakwira yekumanikidza fan inopa simba rekusimudza ese marudzi epakati zvigadzirwa kubva kune iwo anotenderera zvigayo, zvinonatsa kana bran anopedzisa kune mapurififiti ekuenderera mberi kusefa uye kusarudzika. Izvo zvinhu zvinowedzerwa mupombi yemweya pombi. Zvimiro: - Yakagadzirwa zvinoenderana nekuverenga chaiko. yakanakisa yekugadzira. - Yakagadzirwa nechando inotenderera simbi iyo iyo ukobvu iri pakati pe1.5mm kusvika 2.5mm. - Simba rakaputirwa, mukati rakadhindwa neyekudya giredhi varnish. - Na ...